Ithebhulethi yeAlldocube X ngoku iyafumaneka kwiIndiegogo nge $ 219 | I-Androidsis
Ithebhulethi yeAlldocube X ngoku iyafumaneka kwiIndiegogo nge $ 219
UIgnacio Sala | | Izaziso, Amacwecwe e-Android
Imarike yethebhulethi, emva kwexesha lokuqala apho bonke abavelisi bazisa iimodeli zabo kwintengiso, iye yancitshiselwa i-greats: i-Samsung kunye ne-AppleNangona sisenakho ukufumana abanye abavelisi abanjengoLenovo abaqhubeka nokwazisa iimodeli kwintengiso.
Kwiiveki ezimbalwa, sithetha ngeThebhulethi yeAlldocube X, ithebhulethi enexabiso elihle lemaliNgaphezulu nje kwe- $ 200, sinokufumana ithebhulethi enesikrini se-2k kunye nebhetri enkulu ukuya kuthi ga kwi-8.000 mAh. Ukuba ubulindele umzuzu ukuze ube nakho ukuwubamba, loo mzuzu ufikile.
Imikhankaso yokubuyisa imali ivumela iinkampani ezinemibono elungileyo ukuba ziyenze ngokufuna inkxaso-mali kubasebenzisi abanomdla kolu luvo kwaye bazimisele ukuxhasa iprojekthi. Ingqalutye ngumzekelo obalaseleyo, ubuncinci ekuqaleni kwayo, kuba ekugqibeleni yathengwa nguFitbit. IAlldocube ngomnye umzekelo ocacileyo wokuba zinokwenziwa njani izimvo ezilungileyo ngenxa yenkxaso yabasebenzisi abanomdla.
IAlldocube isandula ukuqala iphulo lokuxhasa ngemali iAlldocube X, ithebhulethi ene Uhlobo lwe-AMOLED yesikrini esine-2k resolution kunye ne-Android 8.1, izibonelelo esingenakuzifumana namhlanje kwimarike. Ukuba sithathela ingqalelo ixabiso layo lokuqala, i $ 219, inani lezinto ezikhoyo kwimarike lincitshisiwe kuphela kule modeli.
1 Ukucaciswa kweThebhulethi yeAlldocube X
2 Iphulo kwi-Indiegogo
Ukucaciswa kweThebhulethi yeAlldocube X
IAlldocube X, ayisiqhayisi ngescreen se-2k kuphela, kodwa ikwalawulwa yi Iprosesa yeMediaTek MT8176 ihamba ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi, ugcino esinokuthi sandise sisebenzisa amakhadi e-MicroSD.
Ibhetri yeAlldocube X inomthamo we-8.000 mAh kwaye yiyo ukuhlawulisa ngokukhawuleza kuyahambelana, ukuze singaze silinde isiqingatha sosuku ukuba ihlawuliswe, ilungele xa singxamele ukuyisebenzisa kwaye sakulibala ukuyibiza kwangaphambili.
Njengoko bendiphawulile ngasentla, ekuphela kwendlela yokufumana iAlldocube X kukuhamba nge- Inkxaso mali yokukhangela eyenziwe yinkampani ngeIndiegogo. Njengesiqhelo, inkampani isinika izaphulelo ezahlukileyo ngokuxhomekeke kwinani leeyunithi esizigcinileyo, izaphulelo endineenkcukacha ezingezantsi.
1 Alldocube X ithebhulethi- $ 219, kubandakanya i-18% isaphulelo.
2 Alldocube X ithebhulethi- $ 419, kubandakanya nesaphulelo sama-22%.
5 Alldocube X ithebhulethi- $ 1029, kubandakanya i-23% isaphulelo.
Ukuba ufuna ukujonga iphepha le-Indiegogo apho sinokufumana khona iAlldocube X, ungayenza eli khonkco. Ixabiso lokugqibela leli cwecwe liya kuba ziidola ezingama-269, ke ukuba unomdla wokufumana ubuncinci iyunithi, akufuneki uthathe ixesha elide ukwenza njalo, kuba, njengesiqhelo, inani leeyunithi ezikhoyo ngamaxabiso endiwabonisile anqongophele.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, i-Samsung yazisa nge-Samsung Galaxy Tab S4, ithebhulethi eya kuthi kwi-64 GB yayo ifike kwintengiso yeedola ezingama-649, phantse i-euro ezingama-400 ngaphezulu kwexabiso lokugqibela apho i-Alldocube iza kubetha khona kwintengiso ($ 269). Zombini iimodeli zine-4 GB ye-RAM kunye nescreen se-2k, nangona kwimeko yemodeli yeSamsung yi-Super AMOLED. Imodeli ye-Samsung ilawulwa yi-Snapdragon 835 kwaye iza ngokusemgangathweni ngePen, I-stylus esingazukukwazi ukuyifumana nanjengokhetho kwiAlldocube X.
Ukuba ufuna enye Ithebhulethi yezoqoqosho, enescreen esihle sokubukela iimovie, iYouTube, iFacebook kwaye wonwabele umdlalo ongaqhelekanga, IAlldocube X lolona khetho lubalaseleyo lokujonga. Ukuba into esiyifunayo kukonwabela imidlalo esiyithandayo kwiscreen esikhudlwana, intsebenzo ebonelelwa yiprosesa yeAlldocube, eyenziwe yiMediaTek, ayisayi kusinika intsebenzo esinokuyikhangela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » Ithebhulethi yeAlldocube X ngoku iyafumaneka kwiIndiegogo nge $ 219
Kuvuza imizuzu emi-5 yomdlalo weqonga we-Fortnite kwi-Android
Idatha entsha evela kwi-Fortnite yethutyana ye-Galaxy Qaphela 9